Koorsadan, oo ay bixiso HEC Paris, ayaa loogu talagalay dhammaan ardayda ka yaabban qaadashada koorsada diyaarinta, wax kasta oo anshaxeed ah oo aan ahayn kaliya kuwa qorsheynaya inay u diyaargaroobaan imtixaannada tartanka ah ee dugsiyada ganacsiga.
Fasalada diyaarinta ah, koorsadan halyeyga ah oo magaceedu uu qaboojinayo qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare...
Kumanaan arday ah ayaa doorta sanad walba, si ay u sii wataan waxbarashadooda jaamacadeed ka dib. Maxay ka kooban tahay? Ma dhab baa loogu talagalay dadka aqoonta leh? Runtii ma tahay inaad noqoto qof caqli badan si aad ugu guulaysato diyaarinta?
Ma hubo… waxaan u maleyneynaa in diyaargarowga uu qof walba heli karo; waxa kaliya oo aad u baahantahay in aad wax ka ogaato oo dhiiri galiso.
Fiidiyowyadan, loogu talagalay ardayda dugsiga sare iyo diyaarinta, waxay hoos u dhigaan fasalka udiyaargarowga iyagoo la tacaalaya nacaybka badan ee khuseeya. Waanu ku wehelin doonaa inta lagu jiro sahamintan diyaarinta ah, waxaanan kula wadaagi doonaa khibradeena dhowayd ee koorsadan. Fiidiyowyadu waxay ka jawaabi doonaan su'aalahaaga dhammaan wajiyada diyaarinta, gaar ahaan mahadnaqa waraysiyada iyo markhaatifurka diyaariyayaashii, diyaariyayaashii hore laakiin sidoo kale khubarada.
U diyaargarowga dhammaan: ku dhiiran oo guulee Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ Ka noqoshada heshiiska wadajirka ah: kakanaanta arjiga dib-u-noqoshada ayaa qiil u yeelan kara joojinta la beddelay iyadoo waqti la qaadanayo
horedaacadnimada sayniska ee xirfadaha cilmi-baarista
socdaLaga soo bilaabo Diyaarinta ilaa Dugsiyada Ganacsiga: koorsada saxda ah ee aniga?